Vänsterpartiet oo aan lagu casumin ka wada xaajoodka argagixisada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Vänsterpartiet oo aan lagu casumin ka wada xaajoodka argagixisada
La daabacay tisdag 11 april kl 11.56
Wada hadal siyaasadeed
Jonas Sjöstedt, hoggaamiyaha xisbiga Bidixda. sawir: Jonas EkstrÃ¶mer/TT
Xisbiga Vänsterpartiet ayaa doonaya inuu qayb ka noqdo wada hadalka cusub ee dowladu uga hadli doonta ka hortaga argagixisanimo.
Wasiirka arimaha gudaha Anders Ygeman, ayaa laga soo wariyay in uusan casumaada u dirayn xisbiga vänsterpartiet.
- Hadii ay doonayaan in ay wada hadalka ka qeybqaatan wa in ay dib u eegaan go’aanada ay hore u qaateen. Suurtagal ma aha in ay heshiiska qaar ka mid ah ay ka qeyb qaataan qaarna ka tagaan, sida uu sheegay Anders Ygeman.
Labo sano ka hor ayaa wada hadal ku saabsan qorshaha ka hortaga argagixisanimo dowlada ku casumtay xisbiyada mucaaradka. Xisbiga Vänsterpartiet ayaa wada hadalkaas ka baxay maadaama uu aaminsanaa xisbigu in hishiiska shirka ka soo baxay uu khatar ku ahaa dhowrista shaqsiyada qofka.
Hogamiyaha Vänsterpartiet Jonas Sjösted kama shalaynaayo in uu ka baxay wada hadalkaasi, laakinse waxuu aqbalay go’aamada ka soo baxay.
- Go’aamadaasi ma aha in dib looga xaajooda, maadaama ay baarlamaanka hore u ansaxiyeen. Inkastoo oo aay jireen qodobyo oo aan uga fikir duwanayn, taasi kama hor taagano in hada sharciga qeybahiisa kale aan isla fiirino oo wada hadalka aan ka qeybqaadano.
Heshiiska dowlada iyo mucaaradka isku raaceen oo la dhaho ’Strategi mot terrorism’, qodobyo ka mid ah ayaa ahaa in la badiyo kaamiradaha waxa illaaliyo iyo macluumaad aruuriska qarsoodida ah. Jonas Sjösted ma doonaayo in uu fikir ka dhiibto waxa ay xisbigiisa maanta ay aqbalikaraan hadii wada hadalka cusub ay ka qaybqaataan.
Wasiirka arimaha gudaha Anders Ygeman ayaa sheegay in qorshaha la isku raacay 2015 ay ka jiraan go’aamo loo baahan yahay in la qaato sanad iyo labo sano kadib.
Hadii uu Vänterpartiet go’aankiisa ka laabto, markaas waa laga yaabaa in aan wada hadalno, ayuu yiri.